Cnc Machining၊ Cnc အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သူ၊ စိတ်ကြိုက် Cnc ကြိတ်စက် - Lingjun
Shenzhen Lingjun Automation Technology Co., Ltd. ကို 2013 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး တိကျသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ခြင်းများတွင် အဓိကအားဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထုတ်ကုန်တိကျမှုအာမခံချက်၊ ကောင်းမွန်သောအသွင်အပြင်၊ ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုနှင့် အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ ISO9001 နှင့် ISO13485 ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တို့ကို အောင်မြင်ပြီးဖြစ်သည်။
ဆန်းသစ်တီထွင်မှုစိတ်ကူး၊ ဖန်တီးမှု၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် ကြီးမားသောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖန်တီးခြင်း၏သဘောထားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ရှိသင့်သည့်ပုံသဏ္ဍာန်ကို အဆက်မပြတ်ဖန်တီးနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့် မြင့်မားသောတန်ဖိုးများကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရာတွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ပြီး သိပ္ပံနည်းကျစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အပြုသဘောဆောင်သော ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို အဆက်မပြတ်လိုက်စားနေပါသည်။
8+ နှစ် ကုမ္ပဏီသမိုင်း
100 ကျော် ဖောက်သည်အရေအတွက်
အတတ်ပညာ စံမဟုတ်သော စိတ်ကြိုက်ထုတ်လုပ်သူများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် စံပြတိကျသော အစိတ်အပိုင်းများ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းနည်းများကို ပေးဆောင်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကို ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်၊ အရည်အသွေးအဖြစ် ဗဟိုအဖြစ်ခံယူကာ သင်လိုချင်သော ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်မြင့်စက်ပစ္စည်းများနှင့် စက်ကိရိယာများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်များသည် သုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် အဆင့်တိုင်းတွင် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့် ရှုပ်ထွေးသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ရုံသာမက အာကာသ၊ အလင်း၊ ဒရုန်းများ၊ စက်ရုပ်များ၊ မော်တော်ယာဥ်နှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် တိကျသေချာမှုရှိသော အစိတ်အပိုင်းများကို စီမံဆောင်ရွက်ပေးကာ သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ တိကျသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့် တင်းကျပ်သောသည်းခံမှုများကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။
လေးစားအပ်ပါသော ဧည့်သည်တော်များ ၊ အထက်ဖော်ပြပါ ထုတ်ကုန်များအပြင် သင့်အား အောက်ပါ ထုတ်ကုန်များဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
1. Hardware ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ; 2. စာရွက်သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ; 3. အရည်အသွေးမြင့် အာရုံခံကိရိယာ။
အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။